SKU: 5985-28-4 Isigaba: Weight Loss
ukubila Point I-341.10 ° C. @ 760.00 mm Hg (est)
Isilinganiso se-Synephrine hcl esivame ukusetshenziswa kakhulu sine-100mg ngosuku. Lokhu kubhekwa njengesilinganiso esanele sokukwazi ukulahlekelwa isisindo. Kodwa-ke, inani eliphakanyisiwe lokuthi ngisho nabasebenzisi abalimi akumele badlule i-200mg ngosuku. Noma yini engaphezu kwalolu phawu kubhekwa njengobuthi futhi iyobeka umuntu engozini yokuthola umshwalense wemiphumela emibi ebulalayo ehambisana nokuvuselelwa kokusetshenziswa. Kunconywa, ukuqala, i-10 ku-20mg ukuqinisekisa ukuthi i-Synephrine hcl powder ihambelana nomzimba wakho. Ngemuva kokuthatha le mithi yokuqala, kufanele uthathe isikhathi sokuhlola impendulo yomzimba ekugcineni. Uma konke kuhle, isilinganiso sesibili se-20mg singezwa ngemva kwamahora amabili. Ngaphandle kwalokho, isikhathi sokuphepha esiphephile sithatha i-Synephrine hcl powder kanye namahora amabili.
Ukusetshenziswa kwe-Synephrine nakho kuhambisana nemiphumela emibi njenganoma imuphi omunye umuthi. Uma omunye umbhangqwana usebenzisa ukusetshenziswa kwe-synephrine hcl ndawonye ne-caffeine. futhi iza neminye imiphumela emibi. Okulandelayo yiminye imiphumela emibi ejwayelekile:
I-Raw Synephrine Tartrate powder; I-1- (4-hydroxyphenyl) -2- (methylamino) i-tartrate i-ethanol Imininingwane yezifanisi 1- (4-hydroxyphenyl) ...... ..
I-Raw L-Carnitine powder (541-15-1)
I-C-Carnitine powder iyinhlangano engokwemvelo, i-vitamin-like nutrient and supplementary supplement, idlala indima ebalulekile ekukhiqizeni amandla ngokuthutha ......